Al-Shabaab oo weerar culus oo dhimasho leh ka fuliyey dalka Kenya + Khasaaraha - Caasimada Online
Home Dunida Al-Shabaab oo weerar culus oo dhimasho leh ka fuliyey dalka Kenya +...
Al-Shabaab oo weerar culus oo dhimasho leh ka fuliyey dalka Kenya + Khasaaraha
Mandheera (Caasimada Online) – Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerar dhimasho leh ka fulisay gobolka Mandheera ee Waqooyi Bari Kenya, kaasi oo lala beegsaday ciidamada dalkaas.
Weerarka ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa tuulooyinka Sarmaan iyo Dhaaydhaay oo hoostaga degmada Ramo ee gobolka Mandheera, sida ay Al-Shabaab ku sheegeen qoraal lagu baahiyey warbaahintooda.
Waxaa halkaas uu dagaal xooggan ku dhex-maray ciidamada booliska Kenya iyo dagaalyahannada Al-Shabaab.
“Natiijada dagaalka ayaa noqotay in la jabiyo ciidanka Kenya ayna ka cararaan meydadka saddex askari sidoo kalana lagala wareego saanad hub ah,” ayaa lagu yiri war ay baahisay Idaacadda Andalus ee ku hadasha afka Al-Shabaab.
Weerarka kadib ayaa lagu waramay in diyaaradaha dagaalka Kenya ay fuliyeen duqeymo lala damacsanaa dagaal-yahanada Al-Shabaab, balse waxaa sida la sheegay lala beegsaday xoolo u badan lo’.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegatay in ciidankooda ay dagaal culus kula galeen ciidanka Kenya tuulada Darbo-cadaado ee isla gobolka Mandheera, kadib markii Al-Shabaab ay dhexda u galeen ciidan Kenyaan ah oo 10 Mooto ku roondeynayay si ay xaaladda wadada u qiimeystaan.
Warbaahinta Kenya ayaa xaqiijisay jiritaanka weerarkan hase yeeshee faah-faahin badan lagama bixin khasaaraha ka dhashay.